Cunto: Waa maxay SLL
SSL waxay u taagan tahay Laydhka Qalabka Lagu Beddelayo. Waxay u muuqataa farsamo yar oo farsamo, waana sax in la moodo sababta oo ah tiknoolajiga ka dambeeya waa sida saxda ah. Si kastaba ha ahaatee, fikradda ku wareegsan waa mid sahlan. Waxay u shaqeeyaa ilaalinta macluumaadka macaamiisha booqanaya bogga internetka. Maadaama ay xogtu ku socoto internetka mulkiilaha mulkiilaha, ma jirto cid sheegaysa cidda haysata inta ay ku jirto gaadiidka. Marka SSL uu ciyaarayo, wuxuu xariiri doonaa dhammaan xogta si ay u tahay kaliya server-ka martida iyo browserka isticmaalaha oo akhrin kara
Ryan Johnson, Maareeyaha Sare ee 10 Semmat , ayaa sheegay in mid ka mid ah sababaha loo baahnaa SSL ay tahay in ay sahlan tahay in wax laga qabto macluumaadka internetka. Weerarka noocan oo kale ah waxaa lagu magacaabaa weerarka dilaaga ah. Cilmi-baaris ayaa muujisay in ay aad u fudud tahay khabiirada ama dadka kufsiga ujeedadoodu tahay in ay dhexgalaan taraafikada webka. Waxay wax walba bartilmaameeyaan faahfaahinta kaararka deynta ee macluumaadka ku qoran qaabka bogga xiriirka.
Dhab ahaan, intarneetka badankood ee wax ka qabta macluumaadka xasaasiga ah horeba waxay u isticmaalaan farsamada SSL. Kuwani waa kuwa isticmaala kaararka deyminta si ay u socodsiiyaan macluumaadka, taas oo macmiilka macluumaadka khatarta ah. Waa inay noqotaa tixraac tixraac ah dadka raadinaya inay leeyihiin boggooda internetka. Haddii aysan lahayn tignoolajin SSL, waa inay tixgeliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa kale oo muhiim ah in lagu daro tiknoolajiyada SSL xiitaa haddii goobta aysan ka shaqaynin macluumaadka kaararka deynta. Waxaa jira sababo badan oo loo bixiyay tan, oo ay ku jirto qaabka Google ee ku daaweynayo goobaha SSL
Google Chrome iyo SSL
Ka mid ah daalacashada ugu caansan, maanta waa Google Chrome..Bilowga sannadka 2017, browser ayaa bilaabay soo bandhigida boggaga leh SSL-ga si kala duwan. Marka laga reebo oo kaliya muujinaya xakamaynta sanduuqa internetka, hadda waa suurtogal in dadka isticmaala ay riixaan si ay u eegaan macluumaad dheeraad ah. Haddii goobtu aanay hubin, waxay ku siinaysaa digniin ah "Aan Hubin" digniin ah in ay ku kici karto booqdaha haddii ay sii wado socdaalka aan la ilaalin. Waxay ku khuseysaa bog kasta oo soo ururiya furaha sirta ama macluumaadka dhaqaale. Waa qorshaha Google si uu uga dhigo digniinahan in badan oo muuqaal ah xitaa bogag kale
Haddii bogga ama bogga internetka uusan haysan SSL, ka dibna Chrome waxay ku wargelineysaa martida in goobta aysan amaan ahayn taasoo laga yaabo in ay soo celiso dad badan oo martida ah. Waxaa u wanaagsan in uu fuliyo shuruudahan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira faa'iidooyin kale oo la adeegsan karo SSL:
Faa'iidooyinka isticmaalka SSL
Kalsoonida Isticmaalaha Isticmaalayaasha waxay fahmaan muhiimada asturinta taas oo ah sababta boggu u xoojin doono kalsoonida haddii ay leedahay SSL.
SEO SSL ayaa haatan ahmiyad wayn u leh SEO
Xawaaraha Wuxuu adeegsadaa habka cusub ee HTTP micnaheedu yahay in uu leeyahay bog ka dhakhso badan.
Amniga Waxay ka caawisaa ilaalinta macluumaadka milkiilaha iyo isticmaalaha.
SSL Muujinta Dhaqanka
HTTPS kharash ah. Aynu hannaanno, CloudFlare waxay si wadajir ah u siisaa ilo kale
HTTPS waa gaabis. Shabakadaha internetka ayaa si dhakhso ah u shaqeeya halka SSL
HTTPS waxaa loogu talagalay e-ganacsiga. Waxaa jira isbedel guud oo loogu talagalay webka oo dhan
Bixiyo IP. Looma baahna arrintaan inkastoo faa'idooyinka ka soo gala IP-yada loo qoondeeyey
SSL-ga bilaash ah oo ka baxsan kuwa bixiya. Waxay bixiyaan heerka isku midka ah ee amniga laakiin waxay ku kala duwan yihiin tirada sifooyinka
Ka dib marka la rakibo shahaadada SSL, hubi haddii ay jiraan xiriiro jaban, wixii arimo maqan oo maqan, 301 dib udhigista, joogitaanka Robots.txt, iyo in macaamiisha Google Search Console ay shaqeynayaan Source . Marka sidaas la sameeyo, waxay hubisaa in dhamaan bogagga ay yihiin awood ujeedka ugu weyn ee shaqeynaya